June 2018 - Page 5 of 7 - Puntland Mirror Believable Media Website
Madaxweynaha Puntland oo xariga ka jaray waddo cusub oo laami ah oo laga dhisay Garoowe
June 10, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Axad ah si rasmi ah xariga uga jaray waddo laami ah oo isku xiraysa magaalada Garoowe iyo xarumaha dowladda ee kuyaala duleedka magaalada. Iasaga oo […]
June 10, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Washington-(Puntland Mirror) Askarigii Mareykanka ahaa kaasoo lagu dilay weerar ka dhacay Soomaaliya ayaa la sheegay in uu ahaa askari muddo sideed sanno ah kamid ah ciidamada Mareykanka, kana soo shaqeeyay Afghanistan. Staff Sgt. Alexander W. […]
June 9, 2018 Abdi Omar Bile 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada Mareykanka ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in ay sii wadi doonaan howlgalada la dagaalanka argagixisada ee Soomaaliya. “Iyada oo la kaashanayo Dowladda Federaalka Soomaaliya, ciidamada Mareykanku waxay sii wadi doonaan burburinta […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) The Unites States forces said on Saturday that the US will continue counterterrorism operations in Somalia. “In coordination with the Federal Government of Somalia, U.S. forces continue to degrade the terrorist threat posed […]
Afar badmaax oo Iran u dhashay oo laga soo badbaadshay burcadbadeeda Soomaaliya
June 9, 2018 Puntland Mirror 0
Dubai-(Puntland Mirror) Ciidamada sirdoonka Iran ayaa afar badmaax oo Iran u dhashay kasoo badbaadshay burcadbadeeda Soomaaliya, sida uu ku waramay taleefishinka dowladda Iran. Taleefishinka dowladda Iran ee Press TV ayaa sheegay in afarta badmaax oo […]
One U.S. soldier killed in Somalia
A U.S. commando was killed and four others were wounded on Friday when they came under fire in Somalia during an operation against al-Shabaab militants, the U.S. military said. The U.S. special operations forces were […]
Hal askari oo Mareykan ah oo lagu dilay weerar ka dhacay meel u dhow Kismaayo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Askari Mareykan ah ayaa la dilay afar kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii uu dagaal ku qabsaday gudaha Soomaaliya xilli lagu jiray weerar ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay sheegeen milatariga Mareykanka. […]
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay oo soo jeediyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq
June 8, 2018 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujiyay dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Sool oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland, waxayna soo jeediyeen in la joojiyo. “Golaha Ammaanka waxa uu […]
Ruug cadaa saxafi Maxamed Aadan Teera oo London ku geeriyooday
June 7, 2018 Puntland Mirror 0
London-(Puntland Mirror) Maxamed Aadan Xirsi “Teera”, oo ahaa saxafi Soomaaliyeed oo rug cadaa ah ayaa maanta oo Khamiis ah ku geeriyooday magaalada Lnodon ee dalka UK, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisu. Teera ayaa asbuucyadii u dambeeyay […]
Somali-American ku guuleystay tartanka caalamiga ah ee Quraanka akhriska
Wiil dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo matalaya Mareykanka ayaa ku guuleystay tartanka caalamiga ah ee Quraan akhriska, isaga oo noqonaya qofkii ugu horeeyay oo Mareykan ah ee ku guuleysta abaalmarinta. Axmed Burhaan Maxamed, ayaa […]
Maleeshiyada Al-Shabaab oo weerartay saldhiga Balidoogle
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Isniin ah weerar ku qaaday saldhiga Balidoogle oo kuyaala gobolka Shabeella Hoose, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka. Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa maleeshiyadu ay [...]
Garowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Jimce ah u safray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Madaxweynaha ayaa Addis Ababa kaga qaybgali doona shirka wadamada ku bahoobay urur goboleedka [...]
Dowladda Islaamiga ah oo sheegatay masuuliyada qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Boosaaso
Boasaaso-(Puntland Mirror) Dowladda Islaamiga ah ayaa sheegatay masuuliyada qaraxii ismiidaaminta ahaa oo xalay oo Talaado ahayd ka dhacay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee Puntland kaasoo lagu dilay ugu yaraan saddex qof. “Dagaalyahan katirsan Dowladda Islaamiga [...]